PSJTV | मल्लकालीन स्वरूपमा कति राम्रो विद्यालय!
मल्लकालीन स्वरूपमा कति राम्रो विद्यालय!
काठमाडौं: झट्ट हेर्दा भित्री गाउँ–बस्तीमा रिसोर्ट अथवा होम–स्टे खुलेको हो कि भन्ने लाग्छ। नजिक पुगेर नियाल्दा देखिन्छ– कक्षा कोठामा विद्यार्थी पढिरहेका।
यो हो रामेछापको दुर्गम बस्ती सुनापति–३, हिलेदेवीस्थित पशुपति मावि। हेर्दैमा आकर्षक र कलात्मक देखिने विद्यालयमा छाना झिंगटीको छ। भुइँमा ढुंगा ओछ्याइएको छ। बिम, दलिन, झ्याल–ढोका, बार्दली–बरन्डा सबै काठकै।
‘विद्यालय पनि यस्तो कलात्मक बन्छ भनेर पहिलोपटक देख्न पाइयो,’ सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामा भन्दै थिए, ‘अब हाम्रो स्वास्थ्य चौकी, गाउँपालिका कार्यालय पनि यस्तै बनाउन मन छ।’
गत मंगलबार मात्रै उद्घाटन भएको विद्यालय हेर्नैका लागि टाढा-टाढादेखि गाउँले जम्मा भएका थिए। विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्नेलाई गाउँलेले हृदयदेखि स्वागत गरे।
भवन निर्माणमा इन्टर हेल्प जर्मनी, सुलन फर नेपाल र आरपी फाउन्डेशनले सहयोग जुटाएका आजको कान्तिपुरमा खवर छ।
‘विद्यालय साँच्चै नमुना बनेको छ,’ प्रअ तिलकबहादुर बलले भने, ‘विद्यालयमा जोडिएको परम्परागत शैली र सम्पदाका कारण यो भवन इतिहासको झल्को दिने खालको छ।’
विद्यालयमा ४ सय १२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । दुई तलाको ६ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्न झन्डै डेढ वर्ष लागेको थियो । भवन झन्डै ८६ लाख रुपैयाँमा बनेको हो।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्रीकी छोरी मरियम पक्राउ
काठमाडौं: विप्लव समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ । उक्त समूहको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक समाज, ...
काठमाडौं: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि आज पुनः प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण लिएका छन् । बिहीवार नयाँदिल्लीको राजपथमा आयोजित भव्य सपथग्रहण समारोहकाबीच मोदीले दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण लिएका हुन् । ...
२ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीले विज्ञान र १.६ ल्याउनेले व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन संकाय अध्ययन गर्न पाउँछन्। तर संकायअनुसार तोकिएको विषयमा निश्चित ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। विज्ञान समूह अध्ययन गर्न अनिवार्य विज्ञान र ...